Apple waxay horey u haysatay xalka loogu talagalay bug safari laakiin waa inaan sugno cusboonaysiinta macOS | waxaan ka imid mac
Apple waxay horey u haysatay xalka dhiqlaha safari laakiin waa inaan sugno cusboonaysiinta macOS
Saddex maalmood ka hor baylahnimada Safari ayaa soo shaac baxday taas oo u ogolaatay shabakad kasta in ay la socdaan dhaq-dhaqaaqa intarneedka browser-ka oo ay suurtogal tahay in ay go'aamiyaan aqoonsiga isticmaalaha. Nasiib wanaag, mid ka mid ah waxyaabaha lagu garto Apple ayaa ah inay si fiican wax ku ool u tahay hagaajinta dayacanka noocan ah. Waxaan hore u haysanay xalka, si kastaba ha ahaatee waxay u muuqataa in Ma heli doono qof walba ilaa wax cusub laga soo saaro.
IndexedDB waa browserka API ay isticmaalaan daalacashada waaweyn ee shabakada sida kaydinta dhinaca macmiilka, oo ka kooban xogta sida xogta macluumaadka. Caadi ahaan, isticmaalka "siyaasad asal ah oo isku mid ah" waxay xaddidi doontaa xogta ay shabakad kasta geli karto oo inta badan ka dhigaysa in goobtu ay geli karto oo keliya xogta ay soo saartay, ee ma aha ta bogagga kale.
Xaaladda Safari 15 ee macOS, IndexedDB waxaa la ogaaday inuu ku xad-gudbay siyaasaddii asalka ahayd. Cilmi-baarayaashu waxay ku andacoonayaan in mar kasta oo shabakadu ay la falgasho xogtooda, xog cusub oo madhan ayaa la abuuray oo leh magac isku mid ah "dhammaan fareemooyinka kale ee firfircoon, tabs, iyo daaqadaha ee isla kalfadhiga browserka."
Sida laga soo xigtay a WebKit waxay ku ballanqaadeysaa GitHub, iyo sidoo kale sida lagu ogaaday dhexdhexaadiyaha gaarka ah ee MacRumors. Si kastaba ha noqotee, hagaajintu ma heli doonto isticmaaleyaasha ilaa Apple ay ku siidaayo cusboonaysiinta Safari ee macOS Monterey, iOS 15, iyo iPadOS 15.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple waxay horey u haysatay xalka dhiqlaha safari laakiin waa inaan sugno cusboonaysiinta macOS
AirPods 3 waxay helayaan cusboonaysiin cusub
Anteenada Mac waxaa lagu cusboonaysiiyay shaashado cusub oo cajiib ah